सम्बन्धविच्छेद पछि पत्नीलाई पैसा दिनुपर्छ भन्दै आगो लगाएर ११ करोड रुपैयाँ जलाएपछि...
एजेन्सी । क्यानडाका ५५ वर्षीय एक व्यापारीले आफ्नो १० लाख डलर (करीब ११.२ करोड रुपैयाँ) रकम यसकारण जलाए, किनभने सम्बन्धविच्छेदपछि उनी आफ्नी पत्नी र बच्चाहरुलाई यो रकम दिन चाहन्थेनन् । विस्तृतमा
कसरी बन्छ विश्वकै सबैभन्दा महँगो कफी ?
विश्वका १० सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रहरु
पितालाई कफिनको सट्टा नयाँ बिएमडब्लु कार प्रयोग गरेर अन्तिम संस्कार !
जब यी खेलाडीहरुले आफ्नै साथीको घरबार भताभुंग पारिदिए
यस्ता छन् इजरायलबारे अजबगजब तथ्यहरु
यदी इजरायलका कुनै पनि एक नागरिकलाई कुनै राज्य वा संगठनले मारेमा इजरायलले बदला लिने नीति रहेको छ । आफ्नो एकजना जनता मारेको बदलामा इजरायलले ५० जनाको हत्या गर्न पनि पछि पर्नेछैन ।
संसारका यस्ता १० रहस्यमयी वस्तु, जसको आजसम्म अध्ययन हुन सकेको छैन
संसारको इतिहास अचम्मको रहस्यले भरिएको छ । हामी मध्ये कसैले पनि तिनीहरको बारेमा अध्ययन गरेर निश्कर्ष निकाल्न धेरै समय लाग्नेछ । तर, भित्रि रहस्य